Fiaramanidina 63 vita avy any Aostralia no niorin-toerana taorian'ny nahafatesan'ny olona 9 matin'ny lozam-pifamoivoizana tany Sweden
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fiaramanidina 63 vita avy any Aostralia no niorin-toerana taorian'ny nahafatesan'ny olona 9 matin'ny lozam-pifamoivoizana tany Sweden
Miisa 63 ny fiaramanidina vita Aostraliana natsangana manerana an'izao tontolo izao aorian'ny fianjerana fiaramanidina nahafaty olona tany Suède olona sivy no maty. Ny Australian Australian Aviation Security Authority dia nandidy ny fampiatoana ireo fiaramanidina GA8 nataon'ny mpanamboatra monina any Victoria GippsAero, miandry ny famotorana Suède sy EU momba ny tranga 14 Jolay.
Ny fiaramanidina any Suède dia nampiasain'ny vondrona parachuting iray rehefa nianjera tamin'ny filazan'ny tompon'andraikitra eo an-toerana ho iray amin'ireo lozam-piaramanidina ratsy indrindra teto amin'ny firenena.
Ny baikon'ny fampiatoana ny fiaramanidina GA8 dia maharitra hatramin'ny 3 Aogositra.
Miarahaba ny mpahay siansa amin'ny ho avy i Etihad Engineering
Ny minisitry ny toekarena sy ny vola frantsay dia mitsidika ny zotram-piaramanidina etiopiana